KULEYLIYAHA KULEYLIYAHA AYAA SAMEEYA: TILMAAMAHA TALAABO-TALLAABO AH EE SAMEYNTA - KUFSI
Si ay u noqoto cunnooyinka caadiga ah ee laga helo ukun bacrin ah oo caadi ah, xaalado gaar ah waa in lagu daaweeyaa kulubka. Ujeedada kuleyliyadu waa in la abuuro xaalado sida ugu dhow ee suurtagalka ah in shimbir hen ah abuuro for ay farcankiisa mustaqbalka.
Xaaladaha ladnaantu waa suurtagal oo keliya oo leh hababka kuleylka si haboon loo doortay Boqolkiiba hatchability waxay si toos ah ugu xiran tahay kuleyliyaha. Waa qaybta ugu muhiimsan ee naqshadeynta, kaas oo bixiya shuruudo wanaagsan oo geedi socodka ah ee chicks taranta.
Si aad u sameysid iyada oo aan ka mid noqon waxyaabahaani waa mid aan suura gal ahayn Marka laga hadlayo qallal-celinta, horumarinta embriyaha waxay si weyn u gaabin doontaa, shakhsiyaad badan ayaa dhiman doona.
Qaybta kuleylka ee "macmacaanka" waa mid gooni u ah oo abuura oo ilaaliya tilmaamayaasha heerkulka loo baahan yahay inta lagu jiro mudada wareegista oo dhan.
Ma taqaanaa? Shiinaha ayaa ku guulaystay inuu soo saaro ukun digaag ah. Falsifiers ayaa qarsoodi ah magacyadooda. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannadu waxay awood u yeesheen in ay soo saaraan tiknoolajiyadda ay abuurtay been abuurka. Sidaas darteed, qolofka waxaa laga sameeyey carbonate carbonate, iyo content waxaa loo siman yahay iyada oo la isticmaalayo cuntada wax lagu daray, midabaynta midabka iyo gelatin. Dhanka kale, way adagtahay in la kala saaro beenta ukunta dhabta ah, laakiin dhadhanka sheyga ayaa gebi ahaanba ka duwan.
Noocyada kuleylaha kulul
Nooc kasta waxaa lagu gartaa faa'iidooyin iyo khasaare gaar ah, isku xirka aad kala go'aamin karto kuleyliyaha ugu fiican ee qoyskaaga.
Filimadu waxay si degdeg ah u qaadaan heerkulka isla markaana sida ugu dhakhsaha badan qaboojin la'aan iyada oo aan lahayn asare. Filinka laftiguba ma diirin hawada. Tiknoolojigu wuxuu ka kooban yahay kuleylka shayga horay uga jira filimka, sheyga laftiisa wuxuu u jeedaa booska.
Filimooyinka kuleylka ayaa badanaa loo isticmaalaa qiyaasta warshadaha. Faa'iidada sheyga ayaa ah in uu isticmaalo koronto yar, laakiin isla mar ahaantaana waxa ay awood u leedahay in kuleylka loo ilaaliyo heerkii loo baahnaa muddo dheer.
Haddii aad rabto inaad filimka ku quudiso batroolka, markaa waxaad u baahan doontaa inaad iibsato diyaarad ku haboon. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo substrate wax ku ool ah filimka dabaysha. Qiyaastani waxay u oggolaanaysaa kuleylka in uu ku sii jiro xariirka.
Dhibaatada ugu weyn ee kululeeyaha filimka ayaa ah dhibaatada ah in la beddelo (mid ma sameyn karto iyada oo aan loo baahnayn caawinaad takhasus). Khasaare kale ayaa ah qiimaha sare ee alaabta. Intaa waxaa dheer, filimka ma fududa in laga helo iibka.
Xadhkaha fiilada dhaadheer, sida filimada, si deg deg ah u qabso heerkulka iyo qabow si dhakhso leh. Waxaa sidoo kale jira hareeraha kuleylka, sidaas darteed ma jirto meel dhexdhexaad ah. Xadhkaha waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinka warshadaha.
Qaboojiyahaani aad buu u dheer yahay. Waxa kaliya ee burburin kara waa waxyeello farsamo ah oo ku xiran wershada, ka dibna - xajmiga.
Iyadoo ay jirto cillado yaryar, xarigga kuleylku waa mid ka mid ah noocyada kuleylka ugu fiican ee suuqa. Waxaad si ammaan ah ugu xiri kartaa badeecadda si toos ah heerkulka - xadhiggu si weyn uma beddelayo caabbinta, sidaa daraadeed ma dhicin.
Waa muhiim! Aad bay muhiim u tahay in si sax ah loo xisaabiyo dhererka xargaha kulaylka, adigoon wax qalad ah sameyn. Haddii kale, cawaaqibku waxay noqon karaan kuwa ugu xun, xitaa dabka. Sidaa daraadeed, dabayshu waxay la qabataa daryeel fiican.
Maalin kasta, kululeeyayaasha kulaylaha ayaa noqda kuwo caan ah. Kuwani waa badeecooyin jiil cusub, oo aan ka jirin miyir-qabadyada gaarka ah ee ay horay u ahaayeen. Kulayliyayaasha noocan oo kale ah waxay u adkeysanayaan qoyaan, waxay isticmaalaan dhowr jeer koronto yar, waxay kuu oggolaanayaan inaad si sax ah u hagaajiso heerkulka "hooyada hooyada".
Laakiin faa'iidadooda ugu weyni waxay tahay in ay si siman u qaybiyaan kuleylka, iyadoo la isticmaalayo ugu yaraan koronto. Tani waxay suurtogal u tahay in la badbaadiyo badan, maaddaama kululeeyuhu uu si joogto ah u shaqeynayo 18-20 maalmood.
Baahida kaliya ayaa ah baahida loo qabo in la soo saaro nalal dheeraad ah, illaa inta uu jiro waxyeello ayeey ku dhowdahay in la helo laydh ku haboon guriga.
Nuxurka qalabka la tixgeliyaa waa kulaylka u dhaxeeya ukunta iyo hawada - kuleylka ka yimaada dusha sare ee hawada ayaa si toos ah loogu wareejiyaa ukunta cirridka leh, hawada gudaha ka dibna way ka soo baxdaa ukunta kulul.
TEN kuleylka kuleylaha sidoo kale waa mid baahsan. TEN waa mid ka mid ah hababka ugu kalsoon (ammaan) ee kuleylka leh isticmaalka korontada oo yar.
Si ka duwan nalalka laydhka ah, walxaha kululeyntu ma abuurayaan iftiin ku jira qollada kulubka. Ukuntu waxay ku jiraan mugdiga, taas oo ah mid la mid ah xaaladaha dabiiciga ah (sida hoostiisa). Maanta, waddamada ugu badan ee EU-da ayaa durbadiiba ka tagay isticmaalka kuleyliyaha tuubada "diga".
Kuleyliyaha kuleylka ayaa si siman u gudbiya wareegga wareegga aqalka. Waxaa intaa dheer, qalabkani ma aha meel bannaan oo qadar ah.
Si kastaba ha ahaatee, kuleyliyaha ayaa leh tiro khasaare ah. Ugu horreyn, waxaa jira istiraatareer diirran, taas oo khatar ah sababtoo ah khatarta ah in uu ka weynaado ukumaha. Marka labaad, waxaa looga baahan yahay in lagu kala saaro qaybaha birta, maaddaama ay hoos u dhacayaan. Intaa waxaa dheer, kuleyliyaha-dharka leh ayaa adkaan doona in la baddalo haddii ay dhacdo burbur.
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah dadka ka mid ah noocyada digaaga digaaga ah waxay dareemaan cabsi iyo argagax. Magaca cilmiga ee phobia waa buug-cilmiyeed (tarjumaad ahaan suugaan ahaan - "cabsida walxaha ovalaha"). Sababaha abuuritaanka cabsigan wali lama helin. Dunida oo dhan, mid ka mid ah 1,000 qof oo qaangaar ah ayaa ka cabanaya cabsida this. Ovophobia xitaa caanka "Boqor cabsi leh" Alfred Hitchcock.
Kuleyliyaha laydhku waa kuwa ugu badan ee dalbanaya mulkiilayaasha beeraha guryaha. Kala duwanaantan ayaa wanaagsan in la isticmaalo markaa si fudud ayaa loo badali karaa haddii ay waxyeelo tahay. Taas awgeed, nalalka kale ee laga heli karo guriga ayaa ku haboon.
Marka laga hadlayo waxyaabaha yar-yar - kulaylka badiyaa waa mid aan si siman loo qaybin, kala duwanaanshaha heerkulka ayaa la abuuray. Khasaaradan ayaa si gaar ah loo dareemi karaa marka la isticmaalayo nalalka laydhka.
Nalalka dhoobada Halogen ayaa sidoo kale leh dhowr faa'iido daro. Way adagtahay in lagu dabaqo ficilada sababtoo ah xaqiiqda ah in ay kulaylka u kala soocaan hab gaar ah. Mararka qaarkood way adag tahay in la xakameeyo heerkulka kuleylka la bixiyo.
Faa'iido kale waa faafinta joogtada ah ee iftiinka, taas oo aan ahayn kiiska inta lagu jiro habka dabiiciga ah ee chicks taranta.
Shuruudaha aasaasiga ah ee kobcinta
Wixii horumarin buuxda ee embriyaha iyo qabashada chicks caafimaad qaba, microclimate gaar ah waa in lagu abaabulo "macmacaan" macmal ah. Shuruudaha ugu muhiimsan ee kiiskan waa heerkulka iyo qoyaanka.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u barato sida loo doorto kobcin yaryar, sida loo doorto saxbaaxada guriga, si fiicanna u baro sifooyinka muhiimka ah ee isweydaarka sida Blitz, Layer, Cinderella, Stimulus-1000.
Sidaa daraadeed, qolka maskaxda ee mustaqbalka waa in loo qaabeeyaa hab si aad si joogto ah oo xor ah u kormeeri karto heerka heerkulka iyo qoyaanka (taas oo ah, qalab waa in lagu qalabeeyaa heerkulbeeg).
Joogitaanka ukumaha noocyada ugu badan ee shimbiraha waxaa lagu fuliyaa heerkul ah +37.1 ° C ilaa +39 ° C. Maqnaanshaha iyo maqnaanshaha lama ogola. Marka hore, ukumaha waa in loo kululeeyo ugu badnaantii loo baahan yahay, oo lagu muujiyay noocyada shimbiraha gaarka ah, iyo maalmaha ugu dambeeya ka hor inta aan la qaadin, tilmaame waa in la yareeyo ugu yaraan.
Marka laga reebo qaanuunkan waa ukunta digaagdheer - inta lagu jiro 17 maalmood ee kuleelka, heerkulka joogtada ah waa in lagu hayaa +37.5 ° C.
Kuwa soo socda waa shuruudaha heerkulka looga baahan yahay noocyada kala duwan ee digaaga:
haysashada heerkulka ukunta digaaga - + 38-39 ° S, tusaha lagama maarmaanka ah maalmaha dhowaa - +37.6 ° S;
Tirada maalmaha ugu horeeya da'da ukunta duurjoogta - +37.8 ° S, maalmaha ugu dambeeya - +37.1 ° S;
heerkulka la rabo maalmaha ugu horeeya da'da ukunta goose - +38.4 ° S, maalmaha ugu dambeeya - +37.4 ° S;
Qiyaasta loo baahan yahay maalmaha ugu horeeya da'da ukunta turkey - +37.6 ° S, tilmaamihii maalmaha dhowaa - +37.1 ° S.
Huurku waa inuu isbeddelaa. Ku rakib ilaaliyaha qoyaanka oo hubi in ilaa iyo inta uu jiro isbeddelka tilmaamayaasha qoyaanka ee qolka uu ahaa 40-60%, iyo inta u dhaxaysa naaftada iyo xilliga qaboojinta ee chikabka lagu hayo 80%.
Ka hor inta aan la baarin, jaantuska qoyaanka waa in mar kale la yareeyo 55-60%.
Sida loo go'aamiyo cabbirka ugu fiican ee naqshadda
Cabbirrada "meesha loo yaqaan" macmal "waa in la xisaabiyaa horey. Doorashada cabbiradu waxay ku xiran tahay mugga wax soo saarka ee laguu hayo, iyo sidoo kale tirada ukunka lagu dhejiyo qolka.
Qalabka dhexdhexaad ah (dhererka - 45-47 cm, width - 30-40 cm) wuxuu awood u yeelan karaa tirada soo socda ee qiyaasta ukunta:
Digaag - 70 gogo ';
duck (turkey) - 55 gogo ';
Goose - ilaa 40 gogo ';
boodhadh - 200 gogo '.
Marka laga soo tago kor ku xajmiga, xajmiga kuleylaha ayaa saameeya nooca kululeeyaha iyo booska xajinta ee nalalka kuleylka. Waxyaabaha aad ka filanayso in aad dhisato khubaradu sidoo kale waa muhiim - haddii qolaladu yihiin isku mid, moodada xajmiga waxay noqon doontaa mid aad u sarreeya marka loo eego nuqulka.
Ma taqaanaa? Mararka qaarkood digaagga ayaa jiifay ukumo la'aan.
Habka automatic ee qaboojiyaha
Keeska labaad ee qaboojiyaha ayaa ku habboon inuu abuuro "guri-dhigid" guriga. Meel gudaha ah ee qaboojiyaha ayaa si fiican u ilaalisa heerkulka la dhigay. Waxaa kale oo lagu daraa qaybaha iyo roogyada qalabka guryaha si fudud loogu isticmaali karo baakidhka ukunta.
Isla mar ahaantaana, mugga gudaha ayaa ku filan in lagu rakibo qaybta hoose ee nidaamka iswaydaarsiga dareeraha, kaas oo u oggolaanaya in la ilaaliyo qoyaanka.
Ka hor inta aan la bilaabin kulanka ugu dhakhsaha badan ee "miraha" dabiiciga ah ku salaysan qaboojiyaha, aan ku degno meelo muhiim ah.
Sida ku xusan talooyinka la siiyey qaybaha hore ee qodobkan, dooro oo ku rakib habka kuleylka, iyo sidoo kale heerkulbeeg.
Intaa waxaa dheer, si loo hubiyo in hawo lagu rakibo saqafka iyo dabaqa sheyga oo dhan, macnaheedu waa godad. Si looga hortago hawada ka dhexjeeda lakabka hoose ee maqaarka hoostiisa hoostiisa, gali caag ama biraha birta ah ee cabbirka ku habboon gudaha.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo sameeyo kuleyliyaha ka soo qaboojiyaha gacantaada.
Qaabdhismeedka caadiga ah ee looxa dhejiyo ukunta ee naqshadahan waxaa sameeya qaab gaar ah, kaas oo lagu rakibay sida soo socota:
Ku rid sanduuqa hoose ee qaboojiyaha.
Ka dibna xarig ka samee alwaax ka samaysan baakadaha. Ku dhaji sidan oo kale si aad u hubisid in la jeexjeexay mastarada ay ku jiraan 60 darajo jihada albaabka iyo qadarka la midka ah ee jihada kale. Gaariga waa in si adag loo hagaajiyaa.
Ku dhaji asliga ah mashiinka oo leh ukunta ukunta ee wadada kale ee korontada.
Sida loo sameeyo kululeeyaha guriga ka qaboojiyaha hore: fiidiyoow
Hadda waxaad aadi kartaa qorshaha degdegga ah ee kuleylaha:
Buuxi dhowr baasas ah oo ku xiran fiilooyinka korontada ku shaqeeya iyo hal mar oo loo maro nidaamka hawada ee derbiga sare ee qaboojiyaha.
U diyaari ugu yaraan 3 dabaq oo ah 1.5 cm dabaqa kiiska.
Dhammaystir barxadaha gudaha ee xumbada.
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad beddesho geela hore ee baakidhka ukunta.
Marka laga soo baxo dibedda qaboojiyaha, ku rakib dhareerka, oo gudaha ku hagaajiya dareeraha.
Baro sida loo doorto heerkulbeegga kuleyliyaha, haddii aad samaysan karto heerkulbeeg leh gacmahaaga.
Ku rakib labo taageerayaal yaryar oo u dhaw nalalka sare ee kamaradada.
Iska yaree fur furan oo albaabka ah, ku xir xayndaab caag ah. Tani waxay noqon doontaa daaqada daawashada.
Waxyaabaha loo yaqaan 'polystyrene' waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican marka la eego walxaha fudud ee loogu talagalay kulanka golaha "hen". Qalabku waa mid caan ah, maaha oo kaliya sababtoo ah awoodiisa, laakiin sidoo kale waxaa sabab u ah awooda insulating fiican. Qaar badan ayaa sidoo kale soo jiidanaya miisaanka fudud ee polystyrene oo la ballaariyey iyo sida ugu fudud ee la shaqeynayo.
Kudarjiraha ka soo duuban wax soo saarka: video
Xaashida xayawaanka ayaa loo qeybin doonaa afar qeybood oo siman, waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhejiyo derbiyada dhinaca dhismaha.
Warqad kale waxay gooyaa laba qaybood oo siman. Mid ka mid ah ka mid ah laba qaybood oo kale oo ka mid ah waa inaad gashaa 60 cm oo ballaaran, mid labaadna waa 40 cm. Tusaaleyaal cabbirkiisu yahay 50x40 cm ayaa loo isticmaali doonaa xagga hoose ee qolka, iyo walxaha leh 50x60 cm ayaa noqon doona daboolka.
Iska yaree daboolka 12x12 ee daboolka mustaqbalka ahna ku xir dharka caag ah - tani waxay noqon doontaa daaqada mustaqbalka ee mustaqbalka.
Laga soo bilaabo jajabyada isku midka ah ee la helay ka dib markii la sameeyo xaashida koowaad, xaji qaabka taageerada.
Xiga, hagaajinta hoosta. Si aad tan u sameyso, ku dabool geeska ku yaal afargeeska 50x40 cm oo si taxadar leh u geli xaashida.
Kadib markaad sanduuqa ku soo gasho, sii wad nadiifinta taxadar leh ee jirka oo leh cajalad, sababtoo ah dhismuhu wuxuu heli doonaa xoog.
Iska yaree laba xabbo oo dheeraad ah oo xashiishad ah (6x4 cm midkiiba). Lugaha geli gudaha qolka hoose ee derbiyada dheer.
Darbiyada gaaban (40 cm dheer) dhererka 1 cm ee hoose ee dhismaha, samee saddex baaso leh dhexroor ah 1.2 cm si loo hubiyo socodka hawada hawada. Masaafada u dhexeysa wadnaha waa inay isku mid noqotaa. Waa suurad wacan in la gubo dhammaan godadka leh birta birta leh.
Si loo hubiyo in daboolka si fiican loogu dhajiyo dhismaha, xaji baararka caagagga xumbada (2x2 ama 3x3 cm) ee geesaha daboolka. Si baararka si sax ah u galaan qalabka, masaafada u dhaxaysa iyaga iyo geeska xaashida waa inay u dhigmaan 5 cm.
Marka xigta, ka baxsan daboolka, rakib xirayaasha. Samee doqonimo.
Xakamee heer-kulka daboolka ka baxsan. Oo rakibo dareeraheeda ku dhexjirta qiyaasta dhererka 1 cm ee heerka ukunta.
Marka lagu xareeyo saxaarada ukunta, hubso in farqiga u dhexeeya saxanka iyo darbiyada qolka uu yahay 4-5 cm Tani waxaa looga baahan yahay inay xaqiijiso wareegga wareegga hawada.
Waa muhiim! Si aad u ilaaliso diirimaadka ilaa intii suurtagal ah ee suurtogalka ah ee "guriga loo yaqaan" meesha, "ku dheji dhammaan derbiyada gudaha ku leh daboolin leh.
Sawir ka saar sanduuqa
Qalabka wax lagu koontaroolo waa midka ugu jaban ee dhammaan fursadaha ay bixiyaan kuwa isweydaarsiga guriga, laakiin waqti isku mid ah kuwa ugu nugul. Tusaaluhu waa mid sahlan - waxay qaadan doontaa wax ka badan 2-3 saacadood si loo soo ururiyo alaabta. Wax soo saarka qaabka kartoonada siyaabo badan ayaa u ekaa soo saaridda analooga ee polystyrene ballaaran.
Kombiyuutarada ka sameysan sanduuqa kartoonka adiga ayaa sameeya: video
Raadi sanduuq dhexdhexaad ah oo aan habboonayn ee guriga (tusaale, dhererka - 56 cm, width - 47 cm, dhererka - 58 cm). Dhanka gudaha, si tartiib ah ugu dheji sanduuqa leh dareemay ama dhowr lakab oo warqad ah.
Sameey sanduuq dhowr ah oo baaskiil ku xiran. Laga bilaabo gudaha, dib u hagaajin saddex nalalka (25 watts kasta). Ka dabool qaybaha kala duwan ee suufka. Nalalka waa in la dhigaa 15 cm oo ka sareeya heerka ukumaynta ukumaha.
Sii nidaamyada hawo-qaadidda. Si aad tan u samayso, samee derbiyada sanduuqa dhawr meelood oo yaryar.
Daqiiqada daaqada daaqada sare (qiyaasta qiyaasta - 12x10 cm). Dariishadan waxaad ku sii socon kartaa wax kasta oo ku dhaca gudaha gudaha "macmal". Ha ilaawin inaad xirto daaqada leh caag ah daahfurnaan.
Si kali ah ula hadal wax soo saarka cagaha alwaaxa ah ee ukunta, gawaarida dhejinta, kuwaas oo lagu rakibay taraagyada, iyo sidoo kale albaabka.
Gudaha xakamaynta, ku rid heer-kuleylka si loo xakameeyo heerkulka. Iyo in lagu hayo qoyaanka qoyaanka ee hoose ee saliida qaada markabka biyaha.
Waa muhiim! Kaararka "hen" waa mid aan loo baahnayn in la dhigo dabaqa. Si loo hubiyo wareegga hawada dabiiciga ah, waxaa fiican inaad ku rakibto badeecada qoryaha qoryaha ilaa 20 cm.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo qalabeeyo ukunta laysku karsado. Tani ma aha nidaam waqti aad u badan, laakiin ka hor inta aan la rakibin waxaa lagula talinayaa inay si xoog leh uga shaqeeyaan mashruuca si aanay u seegin sumadaha suurtogalka ah ee laga yaabo inay soo baxaan inta lagu jiro habka wax soo saarka.